I-klorine, iyingozi kwintlanzi | Ngeentlanzi
Yile ndlela ichlorine echaphazela ngayo iintlanzi zethu
Xa kufuneka sitshintshe amanzi kwiintlanzi zethu, into esiqhele ukuyenza kukutshintsha indawo okwethutyana ngelixa sifaka ulwelo olutsha. Into elula ekuqaleni inokuba yingozi kunokuba sicinga. Ingakumbi kuba, ukuba uyaphosa amanzi etephu, ungabulala izilwanyana. Isizathu asikho enye ngaphandle kweklorini efakiweyo, into eyingozi kakhulu.
Njengoko usazi kakuhle, chlorine Isetyenziselwa ukubulala iintsholongwane emanzini nokubulala zonke iintsholongwane ezikuwo. Yinto enje elungileyo, yinto entle kakhulu kuba siyakuphepha ukosuleleka sisifo okanye isifo. Kodwa kwiintlanzi, ezifumana ioksijini kule ndawo, ukuphefumla i-chlorine yinto egqiba ubomi babo. Ngokukodwa kuba wonakalisa ngokungenakulungiseka umzimba wakho, ukhokelela kwizifo ezininzi ezinokubulala.
Kwelinye icala, kuya kufuneka uyazi ukuba kukho iimveliso eziza kukunceda coca amanzi ngaphambi kokuyibeka kwi-aquarium. Ukuba uya kwivenkile yezilwanyana zasekhaya, sicebisa ukuba uthenge iimveliso ezichasene neklorini, kuba ezi ziya kukunika isandla ukuthintela ububi obukhulu. Khumbula kwakhona ukuba awukwazi ukutshintsha amanzi ngaxeshanye, kodwa ngokuyinxenye.
Ngexesha elizayo xa kufuneka utshintshe amanzi entlanzi yakho, gcina ezi ngcebiso engqondweni. Uninzi kuba zikhona ibalulekile Ukuqinisekisa ubomi kwiintlanzi zakho. Ukuba usandul 'ukuqala, unokucela ingcali kwiingcebiso. Siqinisekile ukuba ngokuziqhelanisa okuncinci uza kwenza izinto ngokuchanekileyo kwaye ngaphandle kwengxaki.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » Yile ndlela ichlorine echaphazela ngayo iintlanzi zethu
Ukuzaliswa kweentlanzi ze-betta
Amanyathelo okhuseleko xa uhombisa i-aquarium